UNGAYIYEKA NJANI IMINQWENO YESWEKILE KUNYE NOKUTYA OKUNGAFUNEKIYO - IMPILO
Iingcebiso ezilula zokumisa iminqweno yeswekile kunye nokutya okungafunekiyo
Uninzi lwethu, igama lomnqweno linokubonakala limsulwa, akunjalo?
Kwabaninzi; Nangona kunjalo, njengokufumana kwakhona iziselo ezinxilisayo okanye iziyobisi, inkanuko ithetha okungaphezulu kunoko. Kuba bantu, iminqweno yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo njengoko inokubangela ukubuyela umva, okunokubangela ukuba baphulukane neentsapho zabo, imisebenzi, amakhaya, kwanobomi babo. Kulungile, iminqweno ingangumba wobomi okanye wokufa kwabo bantu.
Thelekisa loo nto kwiswekile okanye kwikhoboka lokutya okungenamsoco. Ukunikezela kwinkanuko kunokuthetha ukuba umntu okwazileyo ukutya usempilweni ngokupheleleyo iinyanga, ebuyela umva kwaye ubuyile ekutyeni ukutya okungenampilo ngalo lonke ixesha. Loo mntu ubuyile kwindawo yokuqala, njengomlutha njengokuba babenjalo ngaphambi kokuyeka.
Inye into ebaluleke kakhulu ukuba uyiqonde ukuba ufuna ukwazi ukuyeka iinkanuko, kukuba ukunikezela kwinkanuko akuthethi ukuzonwabisa ngelo xesha linye, nangona ingqondo yakho inokuzama ukukuqinisekisa ngaloo nto. Ukunikezela kuloo mnqweno kuthetha ukuba uya kuzonwabisa ngoku, mhlawumbi emva komhla, okanye kwiintsuku ezimbalwa kamva, emva koko uphinde (kwaye kaninzi).
sebenza kwimisebenzi yasekhaya kwi-intanethi
Ukulawulwa kwesiyobisi kwikhoboka kuya kubangela ukuphinda kumiselwe kwakhona ukuxhomekeka kwamachiza kwinto elikhoboka. - KutheniQuit.com
Ungayiyeka njani iminqweno
Ukuqala, ndiza kuchaza iindlela ezimbalwa endikholelwa ukuba ziya kunceda ukuyeka ukunqwenela iswekile kunye nokutya okungenamsoco. Nangona kunjalo, ezi ndlela zinokusebenza kulo naluphi na uhlobo lomnqweno, kubandakanya icuba okanye iziyobisi.
Emva koko, ndiza kudwelisa ezinye iindlela endizifumene ngexesha lophando lwam. Ezinye zazo khange ndizame ngokwam, kodwa zinokuba luncedo kubantu abathile.
1. Thatha ishawa eshushu
Le yeyona ndlela ilungileyo ndiyaziyo.
Kukho into malunga nokuphumla kwisitya eshushu esinceda ukuyeka umnqweno. Andazi ukuba kutheni, kodwa isebenza kakuhle kum.Intengiso
Ishawa kufuneka ibe HOT. Awushushu kangangokuba utshise ulusu lwakho, kodwa ushushu ngokwaneleyo ukuba ungadlula kwindawo yakho yokuthuthuzela. Kukwabalulekile ukuyinika ixesha elaneleyo, mhlawumbi imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30.
2. Thatha uhambo okanye ubaleke
Oku kunokunceda kakhulu. Kubalulekile ukususa ingqondo yakho kuyo nantoni na oyinqwenelayo, nokuba kukulangazelela iswekile, a Ukufuna inicotine , okanye nantoni na. Xa uhleli ekhaya esofeni yakho, kunzima kakhulu ukuba ingqondo yakho ijolise kwenye into.
Andazi ukuba kutheni le nto isebenza, mhlawumbi zii-endorphins, umoya omtsha, okanye inyani yokuba uyakwazi ukucinga ngenye into?
Ukuhamba ixesha elide kukhethwa, ubuncinci imizuzu engama-30.
3. Zikhumbuze ukuba kutheni uyekile, kwaye uza kuphulukana nantoni na ngokunikezela
Xa inkanuko ithi gqi engqondweni, iyasebenza kakhulu ekuthinteleni ezinye iingcinga. Kunokuba nzima ukukhumbula ukuba kutheni uyeke kwasekuqaleni.Intengiso
Kungenxa yoko le nto kungumbono olungileyo ukuba ube noluhlu lwezizathu zokuba uyeke, kunye noluhlu lwezibonelelo ocinga ukuba unokulufikelela ngokunikezela ngokutya okungekho mpilweni kwixesha elide. Ukuba unoluhlu, funda. Ukuba awunayo, zama ukukhumbula izizathu zokuyeka. Sukucinga nje ngazo, kwaye sukufunda nje uluhlu, zama ukukhumbula ngendlela oziva ngayo malunga nezo zinto kwaye uziqwalasele.
Kwakhona, zama ukukhumbula indlela oziva ngayo ngethuba lokugqibela xa unokutya okungekho mpilweni emva kokuthatha isigqibo sokungabinako. Mhlawumbi yayikukuziva unetyala, okanye waziva ugula ngenxa yobuthathaka bakho?
Zama ukukhumbula ngokufanelekileyo indlela owawunayo, hayi kuphela into yokuba waziva umbi.
4. Ezinye iindlela
Kukho ezinye iindlela zendlela yokuyeka iinkanuko endakha ndeva abantu bethetha ngazo. Ngokwam, ezi azisebenzi kum, kodwa zinokunceda abanye.
Ndikhe ndabona abanye abantu (ekuthiwa ziingcali) bancomela ukuba unike kancinci kwaye ufumane into encinci oyinqwenelayo. Sukwenza lonto. Yeyona nto imbi onokuyenza. Ukuba ulikhoboka lokutya okungekho mpilweni oko kuya kukhokelela ekubuyeleni ngokupheleleyo kwaye mhlawumbi kukuzinkcinkca ngotywala.Intengiso
Unento emnandi, njengesiqhamo. Oku kunokusebenzela abanye abantu, kodwa ndifumana iminqweno yokutya okungekho mpilweni nangona nditye nje isidlo.
Sela amanzi. Abanye abantu bayathanda ukubanga ukuba iinkanuko zibangelwa kukulamba okanye ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, kodwa andivumelani noko. Ndiyakholelwa ukuba indlala kunye nokunqwenela zizinto ezahluke ngokupheleleyo.
Yitya rhoqo. Abanye bathanda ukucebisa ukuba iminqweno inokuthintelwa ngokutya amaxesha ngamaxesha ngemini. Ngenxa yokuba ukutya rhoqo kunokubangela umhlaza wekolon, andikwazi ukucebisa loo ndlela.
Thetha nomntu. Thetha nomntu oyaziyo into ohamba kuyo, ubachazele ukuba unqwenela ukutya okungenampilo kwaye ubacele ukuba bakukhuthaze.
Musa ukusebenzisa iilekese ezingezizo ezendalo. Le ibonakala ngathi inengqiqo. Ukuba uziva ngathi iilekese zokufakelwa zikunika iminqweno, kunokuba ngumbono olungileyo ukuba ungabinazo.
Yitya iiprotein ezininzi. Ndive abanye abantu becebisa oku.
Susa izilingo. Lo ngumbono olungileyo. Ukuba awukugcini ukutya okungenampilo endlwini yakho, unokuthintela loo minqweno ukuba ingenzeki kwasekuqaleni.
Zilolonge. Olu lolunye uluvo olulungileyo. Ukuzivocavoca rhoqo kunokuphucula impilo yakho yengqondo kunye nokuphila kakuhle, okunokuthintela ukuba loo minqweno ingenzeki.
Lala ngokwaneleyo. Oku kubalulekile nakwimpilo nakwintlalo-ntle.
Lawula uxinzelelo. Oku kubalulekile nakwimpilo yakho iyonke.
Gwema izinto ezithile ezibangela. Zama ukunqanda imisebenzi ethile okanye iindawo ezikunika iminqweno.
Yitya ukutya okusempilweni. Kuyanceda ukutya ukutya okusempilweni ngokubanzi.
Thatha idosi yedosi esezantsi ekumgangatho ophezulu we-multivitamin. Oku kunceda ukuthintela nakuphi na ukusilela kwesondlo.
Musa ukulamba kakhulu. Eli lelinye icebo elilungileyo. Ukuthintela ukuba ungalambi kakhulu kuya kunceda ukuthintela iminqweno engalawulekiyo ukuba ingaveli.
Ezinye zezi ngcebiso malunga nendlela yokuyeka umnqweno ngokuqinisekileyo zinokuba luncedo kubantu abaninzi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuba uyakwazi ukoyisa iswekile kunye nokutya okungekho mpilweni ekuhambeni kwexesha, le minqweno iya kuyeka ekugqibeleni. Iminqweno inokuba yinto eqhelekileyo ekuqaleni, kodwa emva kweeveki ezimbalwa kunye neenyanga zokuyekisa, ngekhe ibe yingxaki.
Eyona ndlela yokugcina iiphasiwedi
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: I-Flickr kwi c1.staticflickr.com
iinwele ezimfutshane zamadoda ngo-2015
uyigcina njani indlu yakho icocekile kwaye ilungelelene
lala ngasekhohlo okanye ngasekunene
uthini amaphupha akho?
ukuthatha ikhefu kwimidiya yoluntu
indlela yokulawula umona kubudlelwane
lahla amehlo akhukhumeleyo ekulileni
Ukuba Ngumzali 2 Ukuqonda Ngokwakho Ukucinga Ngendlela Eyakhayo Ukwenzakala Kunye Nokubuyiselwa Kwimeko Yesiqhelo Imisebenzi Yosapho